#Tababare Guardiola ayaa dhaleeceeyay liiska musharixiinta abaal-marinta laacibka sanadka - Get Latest News From Horn of Africa
By WARIYAHA CAALAMKA On Aug 4, 2019 Last updated Aug 4, 2019
Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka hadlay xulashada liiska ciyaartoyda qeybta ka ah musharixiinta abaal-marinta laacibka sanadka ee The Best oo ay bixiso FIFA.
Xiriirka kubadda cagta Adduunka ee FIFA ayaa ku dhawaaqay 10-ka ciyaaryahan ee u sharraxan abaal-marinta laacibka sanadka ee The Best oo ay bixiso FIFA, waxayna kala yihiin, Mane, Mbappe, Messi, Salah, Cristiano Ronaldo, De Jong, De Ligt, Hazard, Harry Kane, Virgil van Dijk.
Hadaba wargeyska “The Guardian” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu Pep Guardiola kaga hadlay 10-ka xiddig ay FIFA u xulatay inay yihiin musharixiinta abaal-marinta laacibka sanadka ee The Best 2019 wuxuuna yiri:
“Kama hadli doono in murashaxiinta abaalmarintaan aysan mudnayn, laakiin waxaan la yaabanahay in ciyaartoydeyda loo caleemo saaray 4 koob ee horyaalka Premier League ah, aan la magacaabin xitaa hal jeer”.
“Malaha waxay abaal-marintan ku xirantahay hanashada Champions League, marka aan koobkan ku guuleysano ciyaartoydeena waxay ku jiri doonaan liiska musharixiinta”.
“Ma qiimeeyaan tartamada la qabto 10 ama 11-ka bilood ee kale, taasina waa cadaalad darro, uma maleynayo inuu jiro ciyaaryahan soo bandhigay xili ciyaareed ka fiican kan Bernardo Silva”.
“Siddeed sano gudaheed waxaan ku guuleysanay 4 koob oo horyaalka Premier League ah, laakiin Sergio Aguero, David Silva ama Vincent Kompany waligood kuma aysan guuleysan abaal-marinta xiddiga sanadka ee horyaalka Premier League”.
“Inta lagu gudi jiray xili ciyaareedkii lasoo dhaafay waxaan gaarnay 100 dhibcood, anigoo ixtiraamayo Maxamed Saalax, laakiin Kevin De Bruyne wuxuu ahaa mid ka sarreeyay”.
Waxaa xusid mudan in Maxamed Saalax uu ku guuleysatay abaal-marinta xiddiga sanadka ee horyaalka Premier League xili ciyaareedkii la soo dhaafay kii kasii horeeyay ee 2017/2018, wuxuuna abaal-marintan ku garaacay Kevin De Bruyne oo xiligaas horyaalka la qaaday Manchester City.